Cerro डेल Cubilete | यात्रा समाचार
येशूको प्रतिमाहरू पश्चिमी र ईसाई संसारमा गुणा हुन्छन् र जब ती पहाडहरू वा पहाडहरूको माथि उठाइन्छन् तिनीहरू लोकप्रिय गन्तव्यहरू बन्छन्। यदि तपाईं ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोको उद्धारकर्ता ख्रीष्टको बारेमा मात्र सोच्न सक्नुहुन्छ भने, आज मसँग तपाईंको लागि समान छ तर मेक्सिकोमा: बेकर पहाड.
यस मेक्सिकन पहाडको शीर्षमा स्मारकको प्रतिमा छ हिमालको क्रिष्ट त्यसोभए यदि एक दिन तपाइँ मेक्सिकोको यात्रामा जानुहुन्छ र तपाइँ यसको सपना समुद्र तटहरू वा यसको मूल्यवान पुरातात्विक साइटहरू भन्दा बढी केहि जान्न चाहानुहुन्छ भने यस भ्रमणलाई कसरी गर्ने? यहाँ हामी तिमीलाई छोडदछौं जानकारी पहाडको बारेमा, यसको मूर्ति, त्यहाँ कसरी पुग्ने र अन्य सुझावहरू।
1 बेकर पहाड
2 हिमालको क्रिस्ट
यो एउटा पहाड हो गुआनाजाटोको राज्यमा छ, एक राज्य हो कि मेक्सिको बनाउँछ र जुन देशको उत्तर मध्य क्षेत्र मा अवस्थित छ। यस राज्यको कारणले मेक्सिकोको राजनीतिक ऐतिहासिक विकासमा यसको धेरै महत्त्व छ राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पालनायहाँ मेक्सिको क्रान्ति को अन्तिम चरणहरु परिभाषित गरीएको छ र यो पनि होaखनन र कृषिमा धनी क्षेत्र।
पहाड गुआनाजाटोको राजधानीबाट २० किलोमिटर मात्र पर छ, सिलाओ शहर, र Gu२ ग्वानाजाटोबाट नै। यसको उचाई छ 2579 मीटर उचाइ। यो निजी क्षेत्र भित्र थियो तर यसको मालिक, एक वकील र मेक्सिको क्रान्ति का एक प्रख्यात सदस्य, यो दानमा अन्त भयो किनकि उनको स्मारक निर्माणलाई बढावा दिने जोसँग सम्बन्ध थियो। यो परियोजना २० औं शताब्दीको दोस्रो दशकको हो यद्यपि केही बर्ष पछि यो गुनगुनाउन थालेको थियो पछि चर्चले अझ धेरै स्मारकको रूपमा रोज्यो।
यद्यपि क्रिस्टो डेल सेरो डेल क्युबिलेटको इतिहास जाँच गरिएको छ किनकि उदाहरणका लागि, एक बिन्दुमा निर्माणलाई मन नपरेका प्लुटार्को एलास कालेसको सरकारको अधीनमा कामहरू गतिशील बनाइयो। तर जब मेक्सिकोमा राजनीतिक उतार चढाव केही शान्त भए, काम जारी नै रह्यो र १ 1944 .XNUMX मा फेरि उद्घाटन ढु stone्गा राखियो। १ 1950 .० मा यो परियोजना पूरा भयो र स्मारकले विशपको आशिष् पाए।
मूर्ति यो करिब २० मिटर अग्लो र weigh० टन्स तौल हो। यो बारेमा छ कांस्यमा निर्मित विश्वको सबैभन्दा ठूलो मूर्ति। काममा दुई राष्ट्रिय आर्किटेक्ट, पिना र गोन्जालेजको हस्ताक्षर रहेको छ, र भवन र मूर्तिकार, मूर्तिकार फिडियस एलिजोन्डोले बनेका हुन्, कला डेको शैली। यस मूर्तिकारको धेरै जसो अवशेष संगमरमर वा कंक्रीटमा छन्, त्यसैले यो काँसा आफ्नो व्यवसायिक क्यारियरको एक विशेषता हो।
मूर्तिको खुट्टामा एक बेसिलिका छ जुन एक ग्लोब जस्तो आकारको छ र घरका उपासकहरूको लागि ठूलो क्षमता। यहाँ आठवटा स्तम्भहरू छन् जुन देशको आठ इकलौती प्रान्तहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। भित्र एउटा गोलाकार प्लान्ट छ जहाँ तीन पट्टि वेदी छ र यसमा टुक्रिएको छ। विशाल धातुको मुकुटले गोलाकार भल्टलाई हेरेको छ जसको प्वालमा कोलम्बियाको संगमरमरको प्लेटहरू यति राम्रो छ कि यसले उज्यालो बनाउन दिन्छ।
बाहिर ठूलो छ ख्रीष्ट चारै जना स्वर्गदूतहरूद्वारा घस्रनुभयो अधिक सानो। प्रतीकात्मक सेट एक कंक्रीट गोलार्धमा स्थिर छ जुन ब्रह्माण्डको प्रतीक हो र यसमा स्थलीय समानन्तरता र मेरिडियन चिन्ह लगाइएको छ। बदलेमा, गोलाकार, अर्ध-गोला, ती आठ स्तम्भहरूमा निर्भर गर्दछ जुन देशको आठ इकाईहरू भन्छन्। ख्रीष्ट लेओन शहरतिर हेर्दै हुनुहुन्छ।
Este यो मेक्सिकोको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको मसीही अभयारण्य होविशेष गरी नोभेम्बरमा लिटिलर्जीको वर्षको अन्तिम आइतवार, जुन ख्रीष्ट राजाको चाड हो। धेरै मानिसहरू जनवरी5मा पनि उपस्थित हुन्छन् जब एउटा ठूलो जमात चर्चको आँगनमा मनाइन्छ, बच्चा येशू र तीन बुद्धिमान मानिस प्रतिनिधित्व गर्दछन् र घोडसवारहरू नजिकैका शहरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यानर लिएर आइपुग्छन्। अक्टोबरमा पहिलो आइतवार धेरै यात्रीहरू प्राप्त हुन्छन्। यदि तपाईं यी कुनै पनि खास मितिहरूमा पर्दैन भने कुनै दिन तपाईं जानुहुन्छ दिउँसो6मा मास।
तपाईं कसरी सेरो डेल क्युबिलेटमा पुग्नुहुन्छ? त्यहाँ एक राजमार्ग र एक राजमार्ग यस्तै छ यदि तपाईं कारबाट जानुहुन्छ भने त्यहाँ पुग्न एकदम सजिलो छ। तपाईं तलको कार छोड्नुहुन्छ र माथि हिंड्नुहुन्छ तर पक्कै पनि त्यहाँ बस छन् त्यो तपाईं सिलाओ वा गुवानाजाटोमा लिन सक्नुहुनेछ वा तपाईंले पर्यटक यात्रा भाडामा लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई लैजान्छ र तपाईं ल्याउँदछ। पहाडको मुनि तपाईंले धेरै क्षेत्रीय स्टालहरू, स्मृति चिन्ह वा पेय पदार्थ वा खाना देख्नुहुनेछ, त्यसैले मार्ग बनाउनु मनोरञ्जनात्मक हुनेछ।
तर त्यहाँ नजिकै केहि अरू छैन? हो, हो गुआनाजाटो यो धेरै सुन्दर राज्य हो र यसको हो खनन विगत युनेस्कोले सन् १ 1988 XNUMX मा पुरानो खानी शहर ए घोषणा गरेर सम्मानित भएको छ विश्व सम्पदा। यहाँ हामी Pilapila दृष्टिकोण मा जानु पर्छ परिदृश्य को कदर गर्न। अविस्मरणीय
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » बेकर पहाड